ယွမ်မင်းဆက်ဧကရာဇျစာရင်း - တရုတ်ဧကရာဇျ
1368 - 1260
တရုတ်အတွက်ယွမ်မင်းဆက်၏ငါး khanates တဦးဖြစ်ခဲ့သည် ဂိုအင်ပါယာ ကတည်ထောင်, Genghis Khan က ။ ဒါဟာ 1368. Genghis Khan ကရဲ့မြေးဖြစ်သူမှ 1271 ကနေခေတ်သစ်နေ့ရက်ကိုတရုတ်အများစုအုပ်ချုပ် Kublai Khan က တည်ထောင်သူနှင့်ယွမ်မင်းဆက်၏ပထမဦးဆုံးဧကရာဇ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုယွမ်ဧကရာဇ်လည်း Chagatai အဘိဓါန် Khanate, ရွှေ Horde, နှင့် Ilkhanate ၏အစိုးရသောမင်းတို့ (အနည်းဆုံးသီအိုရီအတွက်) သူ့ကိုမှဖြေကြားကြောင်းဆိုလိုတာကမွန်ဂို၏မဟာ Khan ကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိသူတဦးကတရုတ်သမိုင်းအရ, ယွမ်မင်းဆက်လက်ခံရရှိတဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ၏လုပ်ပိုင်ခွင့် ကလူမျိုးစုဟန်တရုတ်လူမျိုးမဟုတ်ခဲ့သော်လည်း။ (- 420 စီအီး 265) နှင့်ချင်းမင်းဆက် (1644 - 1912) ဤသည် Jin ကမင်းဆက်အပါအဝင်တရုတ်သမိုင်း၌အခြားအဓိကမင်းဆက်များ၏စစ်မှန်သောဖြစ်ခဲ့သည်။
တရုတ်၏မွန်ဂိုမင်းများတို့သည်ကွန်ဖြူးရှပ်၏အရေးအသားများအပေါ်အခြေခံထိုကဲ့သို့သောဝန်ထမ်းစာမေးပွဲစနစ်၏အသုံးပြုမှုကိုအဖြစ်အချို့သောတရုတ်အကောက်ခွန်, မွေးစားပေမဲ့လည်းအဆိုပါမင်းဆက်အသက်နှင့်ဆိုသော်လည်း၎င်း၏အဖြစ်ထင်ရှားစွာဂိုချဉ်းကပ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယွမ်ဧကရာဇ်နှင့် Empress မြင်းစီးထံမှအမဲလိုက်သူတို့ရဲ့မေတ္တာသည်ကျော်ကြားခဲ့ကြ, စောစောယွမ်ခေတ်မွန်ဂိုမင်းအချို့ဟာသူတို့ရဲ့လယ်တွေထဲကနေတရုတ်တောင်သူလယ်သမားများ၏မောင်းထုတ်ခံရနှင့်မြင်းကျက်စားရာအရပ်သို့ပြည်မှလှည့်။ အဆိုပါယွမ်ဧကရာဇ်, တရုတ်တခြားနိုင်ငံခြားအစိုးရသောမင်းတို့မတူပဲလက်ထပ်သာဂိုအထက်တန်းလွှာအတွင်းမှမောင်းမမိဿံယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မင်းဆက်၏အဆုံးငှါ, ဧကရာဇ်စင်ကြယ်သောမှနျဂိုအမွေအနှစ်များဖြင့်ပြီးကြ၏။
ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါး, တရုတ်ဂိုအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ထွန်းကား။ စစ်ဆင်ရေးနှင့် banditry နေဖြင့်ကြားဖြတ်ခဲ့သည့်ပိုးလမ်း, တလျှောက်ကုန်သွယ်ရေး, ထိုအောက်မှတစ်ဖန်ခိုင်မာတဲ့ကြီးပြင်း "Pax Mongolica ။ " နိုင်ငံခြားရေးကုန်သည်များဗင်းနစ် Kublai Khan ကန့်တရားရုံးတွင်ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုသုံးစွဲခဲ့သူမာကိုပိုလိုခေါ်ဝေးနေတဲ့လူကိုအပါအဝင်, တရုတ်သို့စီး။
သို့သော် Kublai Khan က Over-တိုးချဲ့ရေခြားမြေခြားကသူ့စစ်တပ် Adventures နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်အာဏာနှင့်တရုတ်ဘဏ္ဍာတိုက်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည်သူ၏ကျူးကျော်များ၏နှစ်ဦးစလုံးဘေးဥပဒ်ကိုအဆုံးသတ်, နဲ့ Java သူ့ရဲ့ကြိုးစားခဲ့သိမျးပိုကျ, ယခုအင်ဒိုနီးရှားထဲမှာမအောင်မြင် (ပေမယ့်ဒီထက်သိသိသာသာ) အညီအမျှဖြစ်ခဲ့သည်။
Kublai ရဲ့ဆက်ခံသည့် 1340s ၏အဆုံးသည်အထိဆွေမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးအတွက်အုပ်ချုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်မိုးခေါင်ခြင်းနှင့်ရေကြီးမှုများဆက်တိုက်တရုတ်ကျေးလက်များတွင်အစာခေါင်းပါးသောအခါကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့မွန်ဂိုကောင်းကင်ဘုံ၏အခွင့်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကွောငျးသံသယမှစတင်ခဲ့သည်။ ဧဒုံဗေါင်းပုန်ကန်လယ်သမားများ၏ဆာလောင်မွတ်သိပ်ရာထူးကနေသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ drawing, 1351 ခုနှစ်တွင်စတင်များနှင့် 1368 အတွက်ယွမ်မင်းဆက်မှောက်လှန်တတ်ကြ၏တက်အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါဧကရာဇ်သူတို့၏ပေးထားသောအမည်များနှင့် khan အမည်များအားဖြင့်ဤနေရာတွင်စာရင်းနေကြသည်။ Genghis Khan ကနှင့်အခြားဆွေမျိုးသားချင်းမကွယ်လွန်ပြီးမှယင်းယွမ်မင်းဆက်၏ဧကရာဇ်အမည်ရှိပေမဲ့, ဒီစာရင်းအမှန်တကယ်သီချင်းမင်းဆက်ရှုံးနိမ့်နှင့်ပိုမိုတရုတ်အပေါ်ထိန်းချုပ်ထူထောင်သောသူ Kublai Khan ကအတူကစတင်ခဲ့သည်။
Kublai, Kublai Khan က, 1260-1294 Borjigin
Borjigin Temur, Temur Oljeytu Khan က, 1294-1307
Borjigin Qayshan, Qayshan Guluk, 1308-1311
Borjigin Ayurparibhadra, Ayurparibhadra, 1311-1320
Borjigin Suddhipala, Suddhipala Gege'en, 1321-1323
Borjigin Yesun-Temur, Yesun-Temur, 1323-1328
Borjigin Arigaba, Arigaba, 1328
Borjigin Toq-Temur, Jijaghatu Toq-Temur, 1328-1329 နှင့် 1329-1332
Borjigin Qoshila, Qoshila Qutuqtu, 1329
Borjigin Irinchibal, Irinchibal, 1332
Borjigin Toghan-Temur, Toghan-Temur, 1333-1370
High-Tech မှဂီယာအတွက်ဘော်ဒိုး, Koolhaas à maison
Borax နှင့်အဖြူရောင်ကော်နှင့်အတူရေညှိ Make လုပ်နည်း
တစ်ဖယောင်းတိုင်အဖြစ် Crayon သုံးပါရန်ကိုဘယ်လို
ပစ္စုပ္ပန် Subjunctive တင်းမာနေ
ချစ်စရာ Boyfriend Quotes
ဘယ်လိုသံမဏိအနံ့ Remove ပါသလား?
မူရင်းပြီးနောက် 15+ နှစ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ4စိတ်ပျက်စရာဟာသရုံတင်
Blackwater Draw - နယူးမက္ကစီကိုအမဲလိုက်၏ 12000 နှစ်များ
စစ်အေးတိုက်ပွဲ: Lockheed ဦး-2
Manoa GPA, SAT နှင့် ACT မှာ Data မှာဟာဝိုင်ယီတက္ကသိုလ်
ယောနသန်ဆွစ်ဖ်အားဖြင့် Gulliver က၏ခရီးစဉ်
ရိုဒီးရှားနှင့် Nyasaland ၏အသင်းချုပ်ကဘာလဲ
မိခင်များအတွက်ထိပ်တန်း 10 နိုင်ငံသီချင်းများ
သင်က Breathalyzer စမ်းသပ်ခြင်း Beat နိုင်သလား?
တစ်သိပ္ပံစက္ကူတစ်ခု Abstract ရေးထားလုပ်နည်း
ဤရွေ့ကားလြယ္ကူခြေလှမ်းများနှင့်အတူ (Assist မှ) 'Assistant' 'Conjugate ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
Megalosaurus အကြောင်း 10 အချက်အလက်
အဆိုပါ Sandlot - ဘေ့စဘောအပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုသင်ခန်းစာ